အမေရိကန်CPI & လက်လီအရောင်း ဒေတာ
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်သည် ဒီဇင်ဘာလကပြလပ်ခဲ့သည့်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၂၀၁၈အတွင်း အတိုးနှုန်းတင်မှု ၃ကြိမ်လောက်အထိ တင်နိုင်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်. ထိုကဲ့သို့ အတိုးနှုန်း တင် မတင်ဆိုသည်မှာ အမေရိကန် CPI ဒေတာအပေါ်တွင် များစွာမူတည်နေပါသည်. အမေရိကန် CPI ဒေတာဆိုသည်မှာ အမေရိကန်နိင်ငံတွင်း စားသုံးသူများ၏ အညွှန်းကိန်းကိုဆိုလိုပါသည်. နိုဝင်ဘာလက လျှပ်စစ်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ ဓာတ်ဆီအစရှီသော စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့သောကြောင့် CPIဒေတာသည် ၀. ၄ %အထိ ရှိလာမည်ဟုခန့်မှန်းထားကြပါသည်. သို့ရာတွင် core CPIသည် အစားအသောက်နှင့် စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုမပြုခဲ့သောကြောင့် မျှော်မှန်းဒေတာထက် လျှော့နည်းခဲ့ပြီး ၀. ၁%သာ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်. ယခုလတွင် ဒေတာအားကောင်းပြီး ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာများပါ အားကောင်းတာမြင်ရပါက USDတန်ဖိုးမြင့်တက်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာအားပျော့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်.
ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာနှင့်အတူ အမေရိကန် လက်လီအရောင်း ဒေတာပါ တပါတည်းထွက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်. ထိုဒေတာများကိုကြည့်ပြီး ခရစ်စမတ်ကာလမတိုင်မီ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ၀ယ်ယူသုံးစွဲမှုအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်မည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.